Sausage & Roasted Tomato Soup - ချက်ပြုတ်နည်းများ
tacos များအတွက်လူတစ် ဦး လျှင်အမဲသားဘယ်လောက်
မြေပဲထောပတ်ချောကလက် lasagna စာရွက်မဖုတ်ပါ
ဘယ်လို antipasto လင်ပန်းကိုလုပ်ပါ
ဒီဟင်းချိုထဲမှာဝက်အူချောင်းတစ်မျိုးမျိုးကိုသင်မထည့်သွင်းမီချက်ပြုတ်ထားသည့်အတိုင်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါသုံးပြီးရှာပါ Kielbasa ဒါမှမဟုတ်ကြက်သွန်ဖြူဝက်အူချောင်းကကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကချက်ပြုတ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးအချို့အရသာအတွက်အနည်းငယ်ကြော်ဖို့လိုလို့ပါ။ ငါပေါ့ပါးတဲ့ပန်းကန်များအတွက်ပင်ကြက်ဆင်ဝက်အူချောင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်! မည်သည့်ခရမ်းချဉ်သီးကိုမဆိုသုံးပါ၊ ကုန်စုံဆိုင်မှရိုးရိုးခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ရိုးမားနှင့်ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အားလုံးကောင်းပါတယ်။
ငါများသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလက်ထဲတွင်သိုထားရန်ကြိုးစားလေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချိုအပါအ ၀ င်အရသာမြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းထည့်သွင်းရန်သေချာစေချင်ပါလိမ့်မယ် လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက် ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်ဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအခြောက်လှန်းမှသာအရသာများရောနှောနေဖို့အချိန်တိုအတွင်းဟင်းချိုမီးခိုးမြူနေချိန်မှာသူတို့ကိုထည့်ပါ။
Parmesan အခွံများသည်ပါ့စမစ်ဒိန်ခဲ၏အစွန်အဖျား ဖြစ်၍ အများအားဖြင့်အသင့်စားဆိုင်ကောင်တာတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ငါ $ 2.50 နှင့်ပတ်သက်။ အခွံ5ခန့်ဝယ်ခြင်းနှင့်လကြာရေခဲသေတ္တာထဲမှာသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထား။ ဟင်းချို, ဝက်အူချောင်းနှင့်ပိုပြီးအရသာထည့်သွင်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသော။
* လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးများ * ကြီးမား Saucepan * နှစ်မြှုပ်ခြင်း Blender *
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်လေး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson အရသာရှိတဲ့ဒီအရသာရှိတဲ့ဟင်းချိုကိုလုပ်ဖို့လွယ်ကူပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးကြိုက်မှာပါ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
ပိုပြီးကြီးစွာသောချက်ပြုတ်နည်းများအဘို့အ Pinterest အပေါ် Penny Spend နှင့်အတူလိုက်နာပါ!
▢၃.၅ ပေါင် ခရမ်းချဉ်သီး လတ်ဆတ်သော
▢၁ ငရုတ်ပွ ပိုက်ကွန်
▢၁ ဇွန်း balsamic ရှလကာရည်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း အီတလီရာသီ
▢၁၂ oz ဝက်အူချောင်း (ထိုကဲ့သို့သော Kielbasa ကဲ့သို့) sliced
▢၁ parmesan အမဲသား (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကြည့်ပါ)
▢၃ ဇွန်း ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ
▢1/2 ဇွန်း သကြားညို
▢၄ ဇွန်း parsley လတ်ဆတ်သောကုန်တယ်
▢နှစ် ဇွန်း စည် လတ်ဆတ်သောကုန်တယ်
▢parmesan ဒိန်ခဲ လတ်ဆတ်တဲ့ပြီးလျှင်
425 °မှမီးဖို Preheat ။
ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်နီများကိုကြမ်းတမ်းစွာခုတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံလွင်ဆီ၊ ရှလကာရည်နှင့်အီတလီရာသီပါဝင်သည်။ သတ္တုပါးလွှာသောနံရံတစ်ခုပေါ်တွင်အလွှာတစ်ခုထဲသို့ဖြန့်ပါ။
၁၅ မိနစ်ကင်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးများကိုအနားတစ်ခြမ်းတွင်မီးမလောင်မှီတိုင်အောင်နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ်ခရမ်းချဉ်သီးကိုမွှေပေးပါ။
လှော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှော 1 ခွက်ကြိုတင်မှာယူပါ။ ကျန်ရှိသောခရမ်းချဉ်သီးများကိုအမဲသားဟင်းရည်ထဲသို့ထည့်ပြီးအများအားဖြင့်ချောမွေ့သည်အထိရောနှောပါ။ (သင်ကလုံးဝအရည်မလိုချင်ဘူး၊ ဟင်းချိုထဲမှာ texture အနည်းငယ်ချန်ထားချင်တယ်) ။
ကျန်ရှိနေသောပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသီးသန့်သိုထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲသို့ထည့်ပါ။ 10-15 မိနစ်မျှတည်ထားပါသို့မဟုတ်ထူသည်အထိ။
parmesan အခွံဖယ်ရှားပစ်။ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ရောမွှေပါ။
Parmesan အခွံများသည်ပါ့စမစ်ဒိန်ခဲ၏အစွန်အဖျား ဖြစ်၍ အများအားဖြင့်အသင့်စားဆိုင်ကောင်တာတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ငါဒေါ်လာ ၂.၅၀ ဖိုး ၅ ခွက်လောက် ၀ ယ်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားတယ်။ ဟင်းချို, ဝက်အူချောင်းနှင့်ပိုပြီးအရသာထည့်သွင်းဖို့ပြီးပြည့်စုံသော။
သင်တန်းEntree, ဟင်းချို ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ဂေါ်ဖီထုပ် Roll ဟင်းချိုစာရွက်